I-Uterqüe iveza iA la Fresca, indlu yayo entsha yokupapasha i-SS21 | IBezzia
UMaria vazquez | 07/04/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni
I-Uterqüe kutshanje ibonise «A la Fresca», umhleli omtsha oquka izindululo zenkampani zeli xesha lonyaka lentwasahlobo-lehlobo lowama-2021 esisandula ukuliqala. Izindululo ezinobuntu obahluke kakhulu ekuboniseni ukuzimisela kunye nethemba.
Iimpawu zekamva kunye neenkumbulo zamashumi asixhenxe ziyahlangana kolu hlengahlengiso lutsha apho sixabisa ukuya kuthi ga kwimikhwa emithathu. Eyokuqala isebenzisa emnyama namhlophe kwiimilo eziphilayo kunye neenkcukacha. Okwesibini kuzibophelele kubuchule bokuyila kunye nokutsala ijiyometri. Kwaye eyesithathu?
1 Mnyama nomhlophe
2 Imifanekiso kwimifanekiso
3 Umbala kunye nokugqunywa kwepateni
Umxube wamalaphu kunye neenkcukacha Ukuhonjiswa okuphefumlelwe yimilo yendalo inkwenkwezi kwiingubo ezimnyama nezimhlophe zendlu entsha yokupapasha. E-Bezzia sithanda kakhulu ukudityaniswa kwengubo yesikhumba kunye neelets kunye nehempe yelinen ehonjisiweyo. Kodwa asinakusilela ukukhankanya iilokhwe nokuba, ngenxa yokuhombisa kwazo.
Ukuprintwa kwe-Checkered akuqapheleki kwizindululo ezintsha zika-Uterqüe. Nangona kungafanelekanga ukuba sithethe kuphela malunga nokuprintwa okutshekiweyo, kuba sikwafumana olunye uprinta olunemibala emibini phakathi kwezindululo: isitulo esigudileyo. Zombini zidityanisiwe nge-poplin jumpsuits kunye neeblawuzi, iikhati zomqhaphu kunye neejezi ezinithiweyo ... Kwaye konke oku kuluhlaza oluhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-lilac tones.
Umbala kunye nokugqunywa kwepateni
Ubuchule bokuyila kunye nethemba, zibonakalisa ezona zimbo zintle zendlu yokupapasha iA la Fresca. Nangona zimbalwa, Ukuprintwa kwe-zig zag kwimibala eqaqambileyo ungabonakali. Nokuba kuncinci xa zidityaniswe nemivimbo yokwenza iimpahla ezifanelekileyo kuphela kubafazi abazimiseleyo nabazithembileyo.
Izambatho ezibalaseleyo kolu hlenga-hlengiso sele zifakiwe kwikhathalogu yaseUterqüe kunye nezo zingazukukwenza oko kungekudala. Ke ukuba ujonge ingubo, sukuyicinga kakhulu okanye uya kushiyeka ungenayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » I-Uterqüe iveza iA la Fresca, indlu yayo entsha yokupapasha ye-SS21